फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - हाय हाय कार्वाही !
हाय हाय कार्वाही ! अशोककुमार शिवा
ट्राफिक प्रहरीले नियम उल्लंघन गर्ने सवारी चालकहरूलाई जरिमानामा बृद्धि ग¥यो रे । बित्यास परिहाल्यो नि लोकतन्त्रमा यस्तो गर्न पाईन्छ र ? ट्राफिक प्रहरीले लोकतन्त्र बुझेकै रहेनछ । बुझ्नु पर्नेले नबुझेपछि बर्बादै भो । हैन यो देशका सरकार र सरोकारवाला निकाय कहिलेदेखि सुध्रिएलान हो गाँठे ! सवारी साधनले जनताहरूलाई कति सुबिधा पु¥याएका छन् भन्ने बुझ्नु पर्दैन ? यस्तो जनताका सेवकहरूलाई जथाभावी कार्वाही गर्न त मिल्दैन नि । सरकारी कार्यालयहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई होस वा स्कुल कयाम्पस पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई् सुबिधा होस् समयमा गन्तव्यमा पुगुन् भनेर भित्र उभिने ठाउँ नहुँदा पनि ढोकामा झुण्ड्याएरै भए पनि ओसारेकै छ । बरु उत्कृष्ट सेवा पु¥याए वापत प्रोत्साहन पो गर्नु पथ्र्यो त । उल्टै जरिवाना सरिवाना थप गर्नु त भएन नि !
सडकका लेन नामधारी सेता रेखा क्रस गर्न नहुने रे । जतिसुकै हतार भए पनि सिटी सुइय पार्नासाथ रोकिनुपर्ने रे । कहिँ नभएको जात्रा । केको लेन केको सेन ? बाटोभरी जतापायो तेतै कुद्न पाउनु प¥यो नि । अनि पो जाम साम हुँदैन त । अझ म त भन्छु फुटपाथमा पनि कुद्न दिनुपर्छ । सडकमा दिनभर उभिएर धुवाँ धुलो खानुप¥यो भन्दैमा सवारी साधनहरूसँग रिस पोखेर हुन्छ ? ट्याक्सीले सरल र सहज तरिकाले जस्ले जता जाउँ भन्यो त्यतै जान मिल्ने गरी मिटरमा अर्थिङ्ग गर्दा पनि कार्वाही नै गरेको छ । कमाएर खानु पर्दैन ? निस्वार्थ सेवा त कसले गर्न सक्छ र सवारी साधनले मात्र गर्ने । ग्यास नपाएको वर्षौ भयो त्यता कार्वाही गर्नु नि । बजारभाउ बृद्धि आकाश छोएको छ त्यता लाग्नु नि । चाहिने काम गर्नु छैन नचाहिने नचाहिने काम मात्र गर्छन । गाडीले धुवाँ फाल्यो भने पनि समातेकै छ । ट्राफिकलाई के थाहा जति कालो धुवाँ फाल्यो गाडी त्यती सफा हुन्छ भन्ने कुरा तिनिहरू भेहिकल मेकानिक भएपो बुझ्थे । धुवाँले बटुवालाई असर गर्छ रे । बटुवाले माक्स लगाएर हिडे त भैहाल्यो । अब माक्स नै नलगाईकन हिँड्छन भने सवारी साधनको के दोष ! खाल्डाखुल्डीमा जमेको पानी छेप्यो भनेर नि कहिलेकहिँ दोष लगाएर कार्वाही गर्ने गर्छन् । हैन त्यो पीच गरेको १५ दिन नपुग्दै खाल्डो पर्ने गरी पीच बनाउनेहरूलाई कार्वाही गर्नु पर्दैन ? बुद्धि जाने पो ।
लोकतन्त्र भनेको त जसलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर्न दिने व्यवस्था पो हो त । त्यसैले पहिले ट्राफिकलाई लोकतन्त्र पढाउनुप¥यो । जुन देशका जनताले जति स्वतन्त्रताका साथ मनपरी गर्न पाउँछन् त्यति नै देशको इज्जत बड्छ । अनि पो लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । सानो दुःखले ल्याएको लोकतन्त्र हो यो? लोकतन्त्र ल्याउन जसले त्यत्रो दुःख गरेको हो तिनैलाई यत्रो सास्ती हुनुपर्ने ? सानो छिसिक्क केही भयो कि ठूलो जरिमाना बुझाउनु पर्ने ? अरुले सपना देख्छन् त्यो पनि पुरा हुन नसक्ने सपना कमसेकम सार्वजनिक सवारीले त विपनामा नै सपना साकार त पा¥याछन् । त्यसैले यो बढेको जरिमाना दस्तुर तुरुन्त घटाउनु प¥यो । घटाउने भए घटाउ नत्र हामी हाम्रो सवारी साधन ग्यारेजमै थन्क्याएर तास खेलेर बस्छौं । साथी हो एकसाथ भनौ त हाय हाय कार्वाही । हाय हाय कार्वाही ।। हाय हाय कार्वाही ।।।
गरौ लापर्वाही । लोकतन्त्रको जिन्दावाद । लोकतन्त्र मास्न पाइँदैन ।
मिस यु काठमाडौं
देश र जनताको लागि
धनमासु सेकुवा पसल
कुकुर र कुकुर
रेमिटेन्स, महोत्सव र महायज्ञ